प्रेमको मौलिक आयाममा वर्णित ‘एन्टोनिया’ प्रकाशित हुँदै - DURBAR TIMES
HomeLiteratureप्रेमको मौलिक आयाममा वर्णित ‘एन्टोनिया’ प्रकाशित हुँदै
डा. प्रदीप ढकालद्वारा लिखित उपन्यास ‘एन्टोनिया’(आध्यात्मिक प्रेमकथा) चाडैं नै प्रकाशित हुने भएको छ । प्रेमलाई आध्यात्मिक दृष्टिबाट प्रस्तुत गरिएको उक्त कृति नेपाली साहित्यकै इतिहासमा मौलिक कृति रहेको बताइएको छ ।
ढकाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव समेत छन् । यसअघि पनि उनका दर्शन तथा संस्कृतिसम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन् ।
कविताको विधामा दखल राख्ने लेखक ढकाल निरन्तर कलम चलाउने गर्दछन् । यो उनको पहिलो प्रकाशित साहित्यिक कृति पनि हुनेछ ।
उनी लेख्छन्, “एउटा सानो प्रयासस्वरुप ‘एन्टोनिया’ (एक आध्यात्मिक प्रेमकथा) उपन्यास तयार भएको छ ।
लेखक ढकालका अनुसार ‘यस उपन्यासमा नेपाली समाजमा हुर्केको एक व्यक्ति आफू हुर्केको समाजसँगसँगै विश्व परिवेशसँग पनि अन्तरक्रिया गर्दछ । सनातन धर्म र दर्शनको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा रहँदै विश्वमञ्चमा उभिएर जीवन र जगतको परिभाषा दिइरहन्छ ।
प्रेमीहरु एकअर्कासँग सामाजिक जीवनमा नबाँधिइकन पनि प्रेम गरिरहन सक्दछन् । प्रेमको उर्जालाई मानव, प्राणीसेवा र जगतकल्याणका लागि लगाउन सक्दछन् । आँखा बन्द गरेर होइन कि आँखा खुलै राखेर प्रकृति, जीवन र जगत नियाल्दै ध्यानस्थ हुन सक्दछ । एकअर्कासँग भौतिक रुपमा टाढा भए तापनि पृथ्वीको नजीक रहेको चन्द्रमामार्फत् पनि आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकासँग प्रेमको सन्देश आदानप्रदान गर्न सक्दछन्’ भन्ने सन्देश पुस्तकमा पाइन्छ ।
जीवनका कतिपय घटना वा विषय यस्ता हुँदा रहेछन् कि छोटो समयका लागि नै किन नहोस्, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र ऊर्जा लगाइएको हुन्छ, त्यसैमा केन्द्रित रहेर बाँच्दा वर्षौँमा बाँचिरहेको अनुभव हुने रहेछ । छोटो समय नै किन नहोस्, समर्पित प्रेमको लहरले जीवनपर्यन्त साथ नछाड्ने रहेछ ।
जीवनमा केही रिक्तता यस्ता हुन्छन्, जसलाई भर्न र पुर्नका लागि प्रेमीहरु भौतारिइरहन्छन् । प्रेमलाई पाउने ध्याउन्नमा नै मानव समाजका विभिन्न अवयव चलिरहेका छन् । सभ्यता, संस्कृति आदि सबै प्रेमका परिणाम हुन् ।
यस्तो लाग्छ प्रेम नपाएकाहरुले आ– आफ्नो अधुरो–अपुरोपनलाई भुल्न र छोप्न गरेको सिर्जनाका कारण समाज र आ–आफ्नो परिधिमा फैलाएका सञ्जालले विश्व समाजको निर्माण भएको छ ।
संसारमा व्यक्ति–व्यक्तिका व्यक्त कथाहरु निकै कम हुन्छन् । तर, अरूका व्यक्त–अव्यक्त कथामा समाहित भएपछि सबै आफ्नै कहानीजस्तो लाग्दा रहेछन् । उपन्यासकारले पनि तिनै कथाहरुमा आफूलाई समाहित गर्ने कोसिस गर्दछ ।
करीब ४०० पृष्ठको उपन्यास ‘एन्टोनिया’ले अध्यात्म र जीवनको परिभाषा र जीवन जिउनुको सार्थकता दर्शाउने प्रयास पनि गरेको छ” ।
उक्त पुस्तक वि.सं. २०७८ को वैशाखमा पाठक समक्ष आउने भएको छ ।
Previous articleकाठमाडाैँका यी क्षेत्रमा आजबाट मेलम्चीको पानी
Next articleरङ्गिचङ्गी देखियाे काठमाडाैँकाे हाेली (फाेटाे फिचर)